ओली-प्रचण्ड झन् आक्रामक किन भए ? – Everest Dainik – News from Nepal
ओली-प्रचण्ड झन् आक्रामक किन भए ?
काठमाडौँ, साउन ८ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड डा. गोविन्द केसी राजनीतिक स्वार्थको सिकार बनिरहेको आरोप लगाएका छन् । डा. केसीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राजनीतिक हतियार बनाएर वार्ता गर्ने प्रक्रियामा समेत अवरोध पुर्‍याइरहेको उनीहरूले बताए ।
उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सडक आन्दोलनका क्रममा दिएका अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए । ‘ठूल्ठूला न्यायिक निकायमा बसेकाहरू निषेधाज्ञा तोड्न किन पाइँदैन भन्दै हिँडेका छन्,’ उनले भने, ‘दुई-चार कक्षा पढेको छैन, त्यसले के जान्दछ कानुन भन्छन्, मसँग सर्टिफिकेट हेर्न त आउनुभएको छैन ।’ उनले सडक आन्दोलन र अनशनलाई पनि फुर्सदका बेला गरेको क्रियाकलाप भने ।
प्रधानमन्त्री बोल्नुअघि नेकपा अध्यक्ष दाहालले पनि विपक्षी कांग्रेसले लासमाथि राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘उहाँको जीवनरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो तर अर्को पक्ष जीवनरक्षाको पक्षमा छैन । तथाकथित लोकतान्त्रिक भन्ने तागतले सायद उहाँको हत्या गर्न र लासको राजनीति गर्न चाहेको हो कि ?’ दाहालले भने, ‘यो के विडम्बना हो ? वार्ता टोली बनाएको छ, सरकारले जीवनरक्षा गर्न लागेको छ अनि सरकारैमाथि, नेताहरूमाथि आरोप नै आरोप, यो के चिज हो ?’
लोकतान्त्रिक भन्ने कांग्रेसको सरकारकै बेला केसी सबैभन्दा बढी अनशन बसेको उल्लेख गर्दै उनले त्यतिबेला के हेरेको भन्दै प्रश्न गरे । ‘अहिले त गोविन्द केसी समाजले पचाइसकेको छ उहाँ बसिराख्नु हुन्छ । उहाँसँग वार्ता हुन्छ, सहमति हुन्छ । त्यो पनि सामान्य प्रक्रिया हो, यसमा अनौठौ मान्नु हुँदैन,’ दाहालले भने, ‘केसीसँग वार्ता गर्न तयार छौं । कति लचिलो हुनुपर्ने हुन्छौं, जीवनरक्षाप्रति संवेदनशील छौं । तर, यहाँ कांग्रेसले खोजेको चाहिँ के हो ? डा. केसीमार्फत आफ्नो राजनीति गर्न खोजेको हो ? के कांग्रेसको अब अरू कुनै एजेन्डा छैन ? हो भने कांग्रेस अब सकियो ।’ कान्तिपुरमा समाचार छ ।